Briteen Dipiloomaatota Ruusiyaa 23 biyya isiitii ari'uuf kan qophoofte tahuu beeksifte - NuuralHudaa
Briteen Dipiloomaatota Ruusiyaa 23 biyya isiitii ari’uuf kan qophoofte tahuu beeksifte
Briteen haleellaa Summii basaasticha qara lamaa lammii Ruusiyaa tahe irratti raawwatameen walqabatee, Dipiloomaatota Ruusiyaa 23 biyya isiitii ari’uuf kan qophoofte tahuu Muummittiin ministeeraa Briteen Terezaa Meey Arba’aa har’aa beeksifte. Miss Meey akka jettetti, Dipiloomatoota lakkoofsa hanganaa Biriteen biyya isii keessaa kan ariitee waggoota 30 dura ture.
Miss Meey paarlaamaa Briteeniif haasaya gooteen, Ruusiyaan dabalataan rakkoo uumuuf kan sochootu yoo tahe, qabeenyi mootummaa Ruusiyaa UK keessatti argamu akka hin sochoone kan ugguramu akka tahee fi lakkoofsi Jila ganna dhufu Geeba Kubbaa miilaa Addunyaa irratti hirmaachuuf gara Ruusiyaa imalu kan hardhistu tahuu akeekkachiifte.
Biriiteen haleellaa Keemikaala Narvii basaaticha lammii Ruusiyaa Sargee Iskiriipaal irratti March4/2018 UK magaalaa Salisbury keessatti raawwatame, mootummaa Ruusiyaattu qindeesse jechuun yakkite. Mr Sargee Iskiripal Ruusiyaa fi Briteenii hujii basaasummaa hoojjaataa kan ture yoo tahu, yeroo ammaa isaa fi intalti isaa Kemikaala Narviitiin summaayanii Hospitaala Briteen keessatti argaman.
March 7, 2021 sa;aa 8:03 pm Update tahe